Maxaan ku doortaa CITY STAY?
City Stay waxay ka qayb galayaasheeda siinaysaa fursad ay:
ku sahmiyaan bulsho cusub halkan magaalooyinka mataanaha ah
Kula wadaagaan dhaqankooda cusub iyo afkooda;
Ku dhisaan xiriir macne ku salaysan oo ay la wadaagaan qoysas, hoggaamiyeyaal, iyo hay’ado kasoo jeeda bulshooyinka ku dhaqan magaalooyinka mataanaha oo haysta dhaqammo kale
Xiriir kula sameeyaan hoggaamiyeyaal bulsho si ay u kordhiyaan xiriirka shaqada iyo kolleejka.
Uga helaan faham wanaagsan oo ku saabsan dhaqammada kala geddisan ee Minnesota.
City Stay waxay soo dhaweyneysaa ka qaybgalayaasha da’ walba leh kuwaasoo:
Ugu yaraan 14 sano jir ah ( Ka qayb galayaasha waxaa loo qaybiyay, ardayda dugsiayada sare, kuwa kolleejka iyo dadka waaweyn ee xirfadlyaasha ah)
Danaynaya in ay bartaan dhaqan iyo af cusub.
Diyaar u ah in ay si xushmad leh ula wadaagaan meel qoys dhaqan kale leh.
U diyaarsan in ay ka qayb galaan koorso ku saabsan waxbarashada magaallada iyo dhaqanka.
Anshax wanaagsan leh (ardeyda dugsiyada sare kaliya)
Ka gudbi kara baaritaan dambiyadeed( dadka waaweyn kaliya)